अत्याधुनिक हतियार र जे–२० लडाकु विमानसहित चीन सीमामा पस्यो – Dainik Sangalo
अत्याधुनिक हतियार र जे–२० लडाकु विमानसहित चीन सीमामा पस्यो
काठमाडौ । अत्याधुनिक हातहतियारसहित चीन सीमामा पसेको छ । भारतको रक्षा मन्त्रालयले सोमबार चीन बारेमा एउटा प्रेस नोट जारी गर्दै सीमा क्षेत्रमा चीन घुसेको जानकारी दिएको छ । भारतीय अधिकारीहरुका अनुसार चीनले फेरि यथास्थिति उल्लङ्घन गरेको हो । नोटका अनुसार २९ अगस्टको रात चिनियाँ सेनाले पूर्वी लद्दाखको भारतीय क्षेत्रमा घुसपैठ गर्ने प्रयास गरे भनिएको छ । भारतीय सेनाले चिनियाँ सैनिकहरूको यो प्रयास असफल बनाएको पनि समाचार एजेन्सी एएनआईले जानकारी दिएको छ । एजेन्सीका अनुसार यसभन्दा पहिले चीनले लद्दाखको नजिकै जे–२० लडाकू विमान तैनाथ गरेको थियो ।
भारतीय सेनाले पेङगोङ सू तालको दक्षिणी किनारमा चिनियाँ सेनालाई रोकेको छ । भारतले भनेको छ, ‘हाम्रो सेना वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण समाधानका लागि प्रतिबद्ध छ । तर हामी हाम्रो सिमाना कसरी जोगाउने भन्ने जान्दछौं । यस मुद्दालाई सुल्झाउन बिग्रेड कमाण्डर स्तरको वार्ता चुशुलमा भइरहेको छ ।’ गत १५ जुनमा चीन र भारतका सैनिकहरु बीच लद्दाखको गालवानमा तनाव हुँदा २० भारतीय सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए ।
सरकारी अधिकारीहरूको उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सीले लेखेको छ, ‘चीनको पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स ९पीएलएएफ० ले होटान एयरबेसमा जे–२० लड़ाकू विमानहरू तैनाथ गरेको छ । यी लडाकुहरू २९–३० अगस्तको बीचको रात घटना हुनु भन्दा पहिले तैनाथ गरिएको थियो । होतान एयरबेस लद्दाखको नजिक छ । चीनले रणनीतिको एक हिस्साको रूपमा यो तैनाथी गरेको छ । फाइटर विमानहरू अझै उडान गर्दैछन् । १० सेप्टेम्बरमा भारतका सबै पाँचै राफेललाई वायुसेनामा भर्ती गरिनेछ ।
गालवानमा तनाव भएपछि लद्दाखमा विवादित क्षेत्रबाट सेना फिर्ता लिन भारत र चीनका सेनाका अधिकारीहरु बीच दुई पटक छलफल भएको छ । यी बैठकहरू चिनियाँ क्षेत्रको मोल्दोमा ३० जुन र ८ अगस्टमा भएको थियो तर कुनै खास समाधान प्राप्त भएन । दुई देशको सेना र कूटनीतिक तहका बीच धेरै चरणमा वार्ता भए पनि चीन फिङ्गर एरिया, देप्साङ्ग र पूर्वी लद्दाखको गोग्रा क्षेत्रबाट पछि हटेको छैन । चीनले बन्करहरू निर्माण गर्न र अन्य अस्थायी निर्माणहरू पनि सुरु गरेका छन् । News Source
बुधबार १७ भदौ, २०७७
कोरोनाबाट आमाको मृत्यु भएको ४ दिनपछि छोराको मृत्यु, श्रीमती, बाब, छोराछोरी संक्रमित
कोरोना जस्तै नेपालमा यस्तो भाइरसको जोखिम बढ्दो छ
निषेधाज्ञा फेरि एक हप्ता थप हुने : कस्तो हुनेछ मोडालिटी ?
बाबा रामदेव गोरु जोत्न आए
नेकपामा फेरी धान्नै नसक्ने कम्पन
मर्स्याङ्दीमा खस्यो मिनी ट्रक, गोताखोर टोलीद्वारा खोजी
बाग्लुङमा दलितलाई संस्कृत पढ्न दिदैनौँ भन्नेलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?
सरकार म कोरोनाले मरे मरौला “तिमीलाई भात ख्वाउन” मल लिन लाईनमा छु
अधिकांशको निर्णय घरैबाट परीक्षा : यी हुन् कलेजले ७ र परीक्षार्थीले पालना गर्नुपर्ने १६ नियम
रुपन्देहीमा २ जना महिलाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु
यम थापाको लेखन तथा निर्देशनमा बन्न लागेको नयाँ चलचित्रमा अभिनेत्री श्वेता खड्का अनुबन्ध
थप २ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु, ५ जनाको घाईते
नेपालकै यो जिल्ला बन्यो कोरोना संक्रमणको ‘हट स्पट’
Prevनेपालकै यस्तो जिल्ला जहाँ एक जना पनि कोरोना संक्रमित छैनन्
Nextभारतमा एक नेपाली युवालाई गो’ली हा’नी ह’त्या…
माघ ५ गतेबाट अनिश्चितकालिन हड्ताल र बन्द गर्ने